सस्तो सैमसंग ग्यालेक्सी नोट:: 8० भन्दा बढी युरो छुट Androidsis
प्रत्येक धेरै पटक, हामी अमेजनमा वास्तविक सम्झौताहरू फेला पार्छौं जसले हामीलाई अपमानजनक मूल्यहरूमा हेरचाह सस्तो गर्न अनुमति दिन्छ। हामीले तपाईंलाई एल्काटेल १ को बारेमा बताइसकेका छौं, एक फोन जुन तपाईं 50० भन्दा कम युरोमा किन्न सक्नुहुन्छ र त्यो इन्टरनेट सर्फ गर्न, सामाजिक नेटवर्कहरू प्रयोग गर्न वा तपाईंको मेल जाँच गर्न पर्याप्त हुनेछ। राम्रो मूल्यमा शक्तिशाली phablet खोज्दै हुनुहुन्छ? उसलाई समात्नुहोस् सस्तो सामसु Samsung ग्यालेक्सी नोट 8 कहिल्यै भन्दा
हो, कोरियाली निर्माताले सबै विगतका छुटहरू भ broken्ग गरेका छन्, तपाईंलाई सस्तो स्यामसंग ग्यालेक्सी नोट buy खरीद गर्न अनुमति दिँदै, percent 8 प्रतिशत छुटमा धन्यवाद, जसले 48० भन्दा बढी युरोको छुटमा अनुवाद गर्दछ। कुनै श doubt्का बिना, एक सम्झौता जुन आउँदो ब्ल्याक फ्राइडा डिलहरूसँग केही गर्न सक्दैन।
1 के आज सस्तो स्यामसंग ग्यालेक्सी नोट buying किन्न लायक छ?
1.1 सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट Buy Buy२eमा मात्र खरीद गर्नुहोस्
के आज सस्तो स्यामसंग ग्यालेक्सी नोट buying किन्न लायक छ?
कुनै श doubt्का बिना, यो तपाइँले अमेजनमा फेला पार्नुहुने सब भन्दा राम्रो सम्झौताको एक हो। हो, यो सत्य हो कि यो टर्मिनल हो जुन बजारमा दुई बर्ष भैरहेको छ, तर यसमा पर्याप्त हार्डवेयरलाई साँचो उच्च-अन्त मानिनु भन्दा बढी छ। तपाईंले केवल यसको विनिर्देशहरूमा एक नजर राख्नुपर्नेछ, यसलाई स्पष्ट पार्नको लागि आज सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट buying किन्नु सुरक्षित बाजी हो।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट 8, पहिलो प्रभावहरू
हामी यसको .6.3..XNUMX इन्च सुपर एमोलेड प्यानलको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन एक इन्फिनिटी डिस्प्ले स्क्रिनले गठन गर्छ जुन QHD + रिजोलुसनमा पुग्छ। वा उस्तै के हो, तपाईं मल्टिमेडिया सामग्री र एक स्क्यान्डल गुणवत्ताको साथ भर्चुअल वास्तविकताको मजा लिन सक्नुहुन्छ। अधिक, यदि तपाईंले खातामा लिनुभयो भने यस मोडेलको HDR समर्थन छ।
यसका लागि यसको Exynos 8895664 process प्रोसेसर थप्नुहोस्, एउटा आठ कोर कोर जनावर जुन RAM जीबी र्याम र GB XNUMX जीबी आन्तरिक भण्डारणको समर्थन गर्दछ जुन हामी यसको माइक्रोएसडी कार्ड स्लट मार्फत विस्तार गर्न सक्दछौं। यसमा यसको शक्तिशाली फोटोग्राफिक सेक्सन र एक ब्याट्री जोड्नुहोस् जुन दुई दिनको स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्दछ, दिनको एक सम्झौताको अगाडि हुन। नहिचकिचाउनुहोस् र यो प्राप्त गर्नुहोस् सस्तो सैमसंग ग्यालेक्सी नोट।, तपाईं पछुताउनु हुँदैन।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट Buy Buy२eमा मात्र खरीद गर्नुहोस्
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » सस्तो स्यामसंग ग्यालेक्सी नोट for खोज्दै हुनुहुन्छ? अब यसको मूल्य अमेजनमा 8 481१ यूरो कम छ!
पिक्सेल X XL सबैभन्दा प्रख्यात धीरज परीक्षण पार गर्दछ